I-Litmus: Ngaba abantu banokuyifunda i-imeyile yakho? | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 21, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Besigxile… er… ukukhala malunga neselfowuni mva kwaye ndiyathemba ukuba siya kuyifumana. Ukuba wenza into enye namhlanje, kufanele ukuba kukuvavanya imiyalezo yakho ye-imeyile oyithumelayo kumthengisi wakho we-imeyile ukubona ukuba abantu banokuzifunda ngokwenene.
Njengoko siphuhlise itemplate yeimeyile yethu imeyile yesisombululo seWordPress, I-CircuPress, ukwakha itemplate ye-imeyile ephendulileyo, efundekayo, kwaye yasebenza kuyo yonke indawo yabathengi be-imeyile yayingeyonto imbi. Siqale ngezinye Iitemplate ze-imeyile zasimahla ezivela kwiZurb.
Xa yayilixesha lokuyila eyethu i-CircuPress kwimfuno, ii-imeyile zemihla ngemihla kunye nezeveki, sayeka saza saqesha iingcali Iimonki ze-imeyile ukuyenza. Iimonki ze-imeyile zingaphezulu kwe-100 ezintle, ezenzelwe iitemplate ze-imeyile onokuzithenga ngokuthe ngqo kwindawo yazo ukuba awunalo uyilo esele luphuhlisiwe.
Kunye neetemplate zethu ze-imeyile, iimonki ze-imeyile zisibonelele ngezethu Litmus iingxelo Esibonelele ngesikrini sombhalo wemeyile zethu nganye kubathengi abahlukeneyo be-imeyile, abaselfowuni kunye nabasekwe kwiwebhu. Ngamnye unokucofa kwaye usondeze nazo ngokunjalo:
Amathuba kukuba uchitha imali eninzi ukukhupha i-imeyile engenakufundeka kwizixhobo ezininzi. Ngaphezulu kwesiqingatha sabo bonke abantu abajonga i-imeyile kwizixhobo zabo eziphathwayo- uyilo lwetafile lwakudala ngaphandle kokuphendula lunokuphoswa nje emgqomeni. Yenza uvavanyo nge Litmus ukubona!
tags: Imeyile (i-Android)Uyilo lwe-imeyileemail Marketingiimonki ze-imeyileInkuthazo ngo-2004Inkuthazo ngo-2008I-Gmail (Android)I-Gmail (i-Desktop)I-Gmail (iOS)I-Gmail (Ifowuni)IHotmail (i-Desktop) iHotmail (eyiFowuni) iThunderbirdi-litmusThumela imeyileImeyile (iOS)Imeyile (OSX)I-Outlook 2003I-Outlook 2007I-Outlook 2010Imbonakalo ka-2011 yeMacI-Outlook 2013Outlook Expressimeyile ephendulayoUngqatyana (i-Desktop)Ungqatyana (iOS)Imeyile yeWindowsImeyile ye-Yahoo (i-Desktop)Imeyile ye-Yahoo (Ifowuni)
Nov 22, 2013 ngo-6:21 AM
Wowu!! Kumnandi nje ukonwabela ngokupheleleyo emva kokuhamba ngeposi. Kufuneka utsho isithuba somsebenzi. Iluncedo kum.